Detail of TOURNMENT LOCAL PROFESSIONAL
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးက်ေမတီ၏ ဦးဆောင်မှု့ဖြင့် မြန်မာ ပီဂျီအေ(Myanmar PGA) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဂေါက်သီးအဖွဲ့ချုပ်တို့ မှကြီးမှူး၍ Yangon Triple Co., Ltd ကအဓိကကူညီ ပံ့ပိုးသော YCDC Cup Open Golf Championship 2016 Presented by Yangon Triple ဂေါက်သီး ရိုက်ပြိုင်ပွဲ၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဇန်န၀ါရီ (၁၃) ရက် နံနက်ပိုင်း တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ မြို့တော်ဂေါက်ကွင်း (ငွေသော်တာ)အမှတ် (၁)တီခုံ၌ကျင်းပသည်။
အခမ်းအနားတွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ (မြို့တော်ဝန်)၊ မြန်မာနိုင်ငံဂေါက်သီးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကိုအေး၊ မြန်မာပီဂျီအေ အတွင်းရေးမှူး ဦးချမ်းဟန်၊ Yangon Triple Co., Ltd မှ Chairman ဦးခွန်နောင်မြင့်ဝေ(ကိုယ်စား)ဦးမြင့်ဝေနှင့် Yangon Triple Co., Ltd CEO ဦးစောလုလုထော်တို့မှ အလှည့်ကျ ဂေါက်သီးရိုက်၍ ပြိုင်ပွဲအား ဖွင့်လှစ်ပေးကာ ပထမနေ့ (၁၈)ကျင်းပြိုင်ပွဲကို စတင် ကျင်းပသည်။
ပြိုင်ပွဲတွင် Professional အဆင့် (၂၄)ဦး၊ ၀ါသနာရှင်အဆင့် အမျိုးသား(၅၁)ဦး စုစုပေါင်းအားကစားသမား (၇၅)ဦးဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။
YCDC Cup 2016 (Second Day Result & Final Day Draw)
– YCDC Cup Open Golf Championship Presented By Yangon Triple Co., Ltd
January 13 - 15, 2016 , City Golf Resort (Silvery), Yangon
Professional - Round 2
Amateur - Round 2
Final Day Draw
Final Day Score
YCDC Cup Open Golf Championship 2016 ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပ
နောက်ဆုံးနေ့(၁၈)ကျင်းပြိုင်ပွဲနှင့် ဆုချီးမြှင့် ပွဲကျင်းပ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာ ပီဂျီအေ(Myanmar PGA) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဂေါက်သီးအဖွဲ့ချုပ်တို့ မှကြီးမှူး၍ Yangon Triple Co., Ltd ကအဓိကကူညီ ပံ့ပိုးသော YCDC Cup Open Golf Championship 2016 Presented by Yangon Triple ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ၏နောက်ဆုံးနေ့ (၁၈)ကျင်းပြိုင်ပွဲကိုဇန်န၀ါရီ (၁၅) ရက် တွင်ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ မြို့တော်ဂေါက်ကွင်း (ငွေသော်တာ)၌ ဆက်လက်ကျင်းပသည်။ ပြိုင်ပွဲအပြီးတွင် ဆုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို (ငွေသော်တာဂေါက်ကွင်း)
တွင်ကျင်းပရာ နေ့အလိုက်အကောင်းဆုံး ရိုက်ချက်ဆုများကို မြန်မာပီဂျီအေ အတွင်းရေးမှူး ဦးချမ်းဟန်မှပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။
ထို့နောက် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာရေးကော်မတီ၊ ကော်မတီဝင် (၅) ဦးစိုးစည်မှ ၀ါသနာရှင်အဆင့်ပြိုင်ပွဲတွင် စုစုပေါင်းရိုက်ချက် ( ၂၁၈ ) ချက်ဖြင့် တတိယရရှိသော ခင်ဇော်ဝင်း၊ စုစုပေါင်းရိုက်ချက် ( ၂၁၈ )ချက်ဖြင့် ဒုတိယရရှိသော ကျော်ဇင်ထွန်း၊
စုစုပေါင်းရိုက်ချက် (၂၁၅) ချက် ဖြင့် ပထမရရှိသွားသောစည်သူရဲရင့် တို့အား ဆုများကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်သည်။
ဆက်လက်၍ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်စိုးမှ Professional အဆင့်တွင်စုစုပေါင်းရိုက်ချက် (၂၁၃)ချက်ဖြင့်တတိယရရှိသော စိုးကျော်နိုင်(HAN Golf Academy)၊ စုစုပေါင်းရိုက်ချက် (၂၁၃)ချက်ဖြင့် ဒုတိယရရှိသော
ရန်မျိုးအေး (CEO Group)၊ စုစုပေါင်းရိုက်ချက် ( ၂၀၅ ) ချက်ဖြင့် ပထမရရှိသော မျိုးဝင်းအောင်(PRGR)တို့အား ဆုများကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်၍ Yangon Triple Co., Ltd Chairman ဦးခွန်နောင်မြင့်ဝေ က ပထမဆုရရှိသွားသော မျိုးဝင်းအောင်(PRGR)အား ဆုကြေးငွေ
Hole By Hole Leader Board
Pos. Score Player City 1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 Today
54543434444345345472
Pos. Score Player City Today Hole R1 Total
Pos. Score Player City Today Hole R1 R2 Total
Pos. Score Player City Today Hole R1 R2 R3 Total
? DOUBLE BOGEY/WORSE